Tirada Tababareyaasha Horyaalka Ingiriiska Ee Shaqadooda Waayey Oo Sii Badatay | Ciyaarside.com
Tirada Tababareyaasha Horyaalka Ingiriiska Ee Shaqadooda Waayey Oo Sii Badatay
Culayska saaran tababareyaasha horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa sii badanaya, waxaana ugu dambeeyey oo shaqadiisa waayey Tony Pulis oo ay kooxdiisa West Brom shandaddiisa u xidhxidhay markii ay u degtay kaalmaha ugu hooseeya.
West Brom oo Sabtidii garoonkeeeda kula kulantay guul-darradii ugu weynayd markaas oo Chelsea ay ku xaaqday 4-0 ayaa waxay isla markiiba masuuliyiinta kooxdu go’aamiyeen in loo baahan yahay isbeddel degdeg ah oo hoggaanka kooxda lagu sameeyo, taas oo ay ka bilaabeen tababare Pulis oo ay caydhiyeen.
Albion ayaa guuleysatay saddexdii ciyaarood ee ugu horreysay ee horyaalka xili ciyaareedkan, laakiin afartii kulan ee ku xigay ayaa ay barbar dhac ku xigsiisay ka hor intii aanay toddoba ciyaarood oo kale guul-darraysan, waxaana guul ugu dambaysay 22 August oo tartanka Carabao Cup ay ka badisay Accrington.
Tababarihii hore ee West Brom ee Gary Megson oo kaaliye u ahaa Pulis ayaa la aaminsan yahay inuu si toos ah ula wareegi doono tababaridda kooxda illaa inta ay maamulku go’aan ka gaadhayaan cidda rasmiga ay ugu magacaabayaan xilkaas.
Guddoomiyaha West Brom oo lagu magacaabo John Williams ayaa waxa uu sheegay in aanay ku degdegin go’aanka ay shaqada kaga caydhiyeen Pulis, laakiin ay ku jirto maslaxadda kooxda oo natiijooyin niyad jab soo haynaysay muddooyinkii u dambeeyey.
West Brom ayaa Sabtida u safri doonta garoonka Wembley ee magaalada London oo ay kula ciyaari doonto Tottenham, waxaana ugu xigi doonta Newcastle oo 28-ka November ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto ka hor inta aanay 2 December foodda is darin Crystal Palace.